wararka maanta-arlaadii.net » Gudoomiye Tuulax Oo shegay in Ay jirto wadda Shaqeyn Xumo Maamulka gobolka Banaadir
Gudoomiye Ku xigeenka Koowaad ee amniga iyo Siyaasadda Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed Tuulax, ayaa shaaca ka qaaday in wada shaqeyn xumo ay ka jirto ammaanka Magaalada Muqdisho.
Tuulax oo ka hadlaayay Shir ka dhacay Xarunta Gobolka Banaadir, ayaa sheegay wada shaqeyn la’aanta ka dhaxeysa Maamulada Degmooyinka iyo Saraakiisha ammaanka inay noqotay culeys soo food saaray Bulshada ku nool Muqdisho.
Gudoomiye Tuulax ayaa sheegay intii uu xafiiska joogay inuu ogaaday wada shaqeyn xumo ka dhex jirta Maamulada Degmooyinka iyo Saraakiisha ammaanka oo qaarkood xittaa aysan isa salaamin.
“Anaga intii aan xafiiska joognay waxyaabaha ugu badan ee aan indhaheena ku aragnay waxa ay aheyd wada shaqeyn la’aan ka dhex jirta Maamulka dhexdiisa, Taliye Boolis iyo Gudoomiye aanan isa salaamin, Gudoomiye iyo ku xigeen aan wada shaqeyn, runtii culeyskaasina wuxuu ku dhacayaa shacabka.” Ayuu yiri Gudoomiye Ku xigeenka dhanka ammaanka iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir.
Gudoomiye Ku xigeenka dhanka ammaanka iyo siyaasadda Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii Magaalada Muqdisho masuuliyiintooda Degmooyinka wada shaqeyn wanaagsan ay u dhexmari laheyd, wuxuuna tilmaamay in arrintaasi ay sahleyso ammaanka oo hagaaga iyo nadaafadda oo dib u soo laabata.
Degmooyinka qaar ee Gobolka Banaadir Saraakiisha ammaanka ee ka hawlgala iyo Maamulada Degmooyinka ayaa hubinta waxa ay tahay inaysan ka dhaxeyn wax wada shaqeyn ah.